Sfimg - International Affiliate: SFIMG - International Business Mgbakwunye smart n'uzo SFI
SFIMG - International Business Mgbakwunye smart n'uzo SFI
International Business Onye Mmekọ ke ọgụgụ isi n'uzo SFI - SFIMG
N'ihi na ndị ị na- achọ azụmahịa ohere na ịntanetị ma na-achọ ndụ ka mma, nwere nnukwu morale , ma, ọ bụghị ndị nwere ego , i nwere ike banye na elu na- na Mgbakwunye nke ụlọ ọrụ dị SFI .
Nke a na -azụ ahịa na-achọ nanị opekempe ise awa kwa izu gị oge na-aga ime na ịntanetị . Na na na na oge gị na ịntanetị ịga karịa ise awa kwa izu. Ọ pụtara na ị na- ama ruru eru iji ohere ka a na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu na SFI
Denyere aha gị > Ọyọhọ niile ọrụ > kwalite ka Who Am > ịme ka a enyi Who Am > Ozugbo ( na nke ahụ bụ ihe niile ị chọrọ ime ! ).
Na-enweghị upgrading ka Who Am mgbalị gị ga-abụ ihe efu. N'ihi na ihe nile nke daashi n'okpuru Who Am ị ga- agafe tupu gị upline n'elu ndị ruru Who Am .
Ọ bụrụ na ị debanyere aha ke SFI ihe i kwesịrị ime ? Ọ bụrụ na ị na- dị nnọọ ka groping iji chepụta otú na-arụ ọrụ ahụ SFI . M na-atụ aro ka ọ na -adị mfe , jupụta perterjemahan LOUNCHPAD ™ asụsụ ga-abụ na na -eyi CRHOME Google i nwere ike iwunye ebe a.
Na-enweghị ọtụtụ ihe Mmalite m ga- ozugbo inye gị otu onye ndu nwere ike ime ka ị ka mma ịghọta otú e si na-agba ọsọ SFI .
1. Lelee larịị ma ọ bụ ọnọdụ dị SFI -> E 3 etoju ma ọ bụ ọnọdụ dị SFI . Ọ bụrụ na ị banyere elu gị " na- esịne ke SFI Ọkwa ", bụ nke mbụ mmekọ (A ) Ọ bụrụ na VP 600 VP , Nke abụọ bụ Executive Mgbakwunye ( Who Am ) ole ihe i Versa VP ke 1500 , nke atọ bụ Team Onye Ndú ( TL ) 3000 VP . Na nke ọ bụla ozo e nwere uru na kerugianya karị. Elele gị n'ọnọdụ ebe ị pụrụ ịhụ na ọ dị n'elu nri akuku oge ọ bụla ị banye SFI .
2. Ọ dịghị mgbe ọ na ọkara - ọkara -> Ọ bụrụ na ị na- ama debara aha ke SFI ekwesịghị ime ya na ọkara na ọkara n'ihi na ọ ga-eme ka ị dị nnọọ igbu oge, ma na nke a ga -ewe gị ihe kpọrọ ihe na -agba agba otu ebe ma SFI . Anọ awa ole na ole n'ihi na oge gị , na ị ga- eche na ya nso ga-eme n'ọdịnihu .
3. Ịbụ Onye Who Am -amalite inweta ego si SFI -> Ị dị mkpa onye ọzọ zoo amalite na- arụpụta site SFI . Ọ bụrụ na ị na -aghọ otu Executive Mgbakwunye ị ga- erite uru. Gịnị bụ uru ? Ihe ị ga- daashi Onu 30-60 % nke Downline , powerline ma ọ bụ na -eresị ị ma ọ bụ gị na downline . Gịnị ka i kwesịrị ime? Nzọụkwụ mbụ bụ gaa Home menu -> My Ka - Ndi List -> pịa otu otu ebe dị " RỤRỤ Setan -" maka akara mmuke ( * ) mara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ logo pịa elu nri akuku ( Ise ). Nzo ukwu nke abuo Nkea ka Hot tụrụ menu -> pịa na ntụpọ ke LaunchPad ™ ọ bụla ebe e nwere mba ajụjụ ị chọrọ zara , egbula aza n'ihi na ọ bụrụ na azịza ya bụ ihe ọjọọ , ị ga- gwara ikwugharị gị azịza ziri ezi iza . Nzo ukwu nke ato na Klick arụtụ n'etiti omume kpọmkwem na isi ' Iji tinye ọkọlọtọ TripleClicks onwe website ma ọ bụ blog ,' Ọ bụrụ na ị dịghị ama nwere ngalaba / blog m na-atụ aro ka ịmepụta blogspot bụghị mere WordPress n'ihi na ọ bụ dakọtara na TripleClicks , na ọ bụrụ na i nwere enwe a blog ahụ bụ nanị mgbe ị pịa ihe e kwuru okwu ya nkọwa họrọ ọ bụla TripleClicks ọkọlọtọ nke na peeji nke họrọ gị họọrọ ọkọlọtọ idetuo na HTML koodu gị blog ọkọlọtọ -> azụ ọzọ si ele akpa itie ọkọlọtọ -> ndị dị n'igbe ahụ pịnye na URL n'akwụkwọ gị URL okwu -> pịa edo onwe ha n'okpuru . ya mere unu ga- Who Am .
4. A Team Onye Ndú Ike ọrụ Standart -> mere Team Onye Ndú ga bụghị blindly ke nkwalite ma ọ bụ na-achọ Downline . Gbalịa mee ihe ndị na-emebu , ma na a kpọrọ aghụghọ , n'ihi na otú a na anyị adịghị deplete oge anyị . Kedu? iji mee ka 5 gị downline ghọọ ihe Who Am kwa ọnwa ahụ ị ga-abụ TL ( Team Onye Ndú ) nke kacha nta ego dollar 100 kwa ọnwa n'enweghị gị nwere ka ọ bụla edinam , ( adịghị mfe ... ;) ) ma na- uche gị na- SVP bagging 10 kwa ọnwa , n'ihi ya, ị ka nwere ike inwe ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ gị downline ịkpata ihe karịrị 5 ndị na -aghọ Who Am .
5. * Ịbụ Onye umengwụ Ma Smart -> Nke a bụ ahịrịokwu na hyperbolic m akwa ata ị na -akpata ihe niile na -eme ka ị na ndị ọzọ na-arụpụta . Olee otú m atọ bụ ịhụ n'okpuru gị downline eji gị unu na ị pụrụ ịhụ n'ebe a.
Ezo gị downline ma ọ bụ gaje J.Randall gị ngwaahịa ke njikọ gateway.Selanjutnya briefed downline ga- ahụ dị ka m Who Am meberi okwu nkowa taa. Amasị m ma ọ bụrụ na ndị enyi anyị ma ọ bụ ndị ikwu maka referrals nwere ike n'ihi na ọ bụ mfe iduzi . Ọ bụrụ na ị nwere website ma ọ bụ blog uzo geeti ị na -etinye na nri na ọnọdụ nke mere na i nwere ike inwe ọtụtụ referrals .
N'otu aka ahụ, na-eduzi gị, Olileanya gị ọzọ kpebisiri ike iso SFI . Ghara iso ? biko aha .
Bụ otu ụzọ ahụ mere SFI mma gị isi ego . Na ClickBucks ị ga- adị mfe ịnọgide na-enwe gị n'ọkwá ma Who Am ma ọ bụ BTL n'enweghị gị okodu ego ma ọ bụ ịzụ ihe na ngwaahịa si SFI . ClikBucks dị mfe iji n'ihi na ọ ka dị mfe dị ka o kwere na usoro ihe omume dị ugbua na obodo nile ọzọ ka Indonesia .
Olee otú Clickbucks :
Nnọọ na ị n'ekwusa ClickBucks unu na saịtị na ọhụrụ affiliater . Ị ga- akwụli ụgwọ $ 1 $ 4 n'ihi na onye ọ bụla edebanye aha Full Access Mgbakwunye ( affiliater ga- enen ke SFI ).
Ọnụego gị ọrụ -adabere n'ọrụ nke ocho oru ke enye ama ọkọbọ ke SFI . Ị nwere ike irite a opekempe ọrụ nke $ 1 ọ bụla edebanye aha . Ma, ọ bụrụ na ọ na-aga ịghọ aghụghọ n'ule site na ịdenye ndutịm emi agaghị ekwe ka ị na -eyi ya ọzọ , aka gị nwa na listi. Ntak-a? Ma eleghị anya, n'ihi na ị denyere aha ga- enwe ike inweta ọrụ ( na nke a bụ ihe m nwere ike ikwu ). Ị ga- 1 SVP maka $ 2 na- akwụ ụgwọ ya. Ezi nri ... were na ị chọrọ ịzụta stof dị na 10 ihe SVP , Ọ bụrụ na ị jikwaa na 10-20 ịbata onye ọ bụla ma ọ bụrụ na opekempe gbakọọ pendapatnnya $ 1. ' S Ọ bụghị naanị na ị na- inwere onye daashi nke upline CV ( Commission olu ) 50 % nke ngụkọta ego ị na -enweta .
Olee otú anyị na- ClickBucks na ya pụta?
Ị nwere ike iji njikọ http://www.sfi4.com/11355467/CB
SFI bụ uzo geeti ma ọ bụ uzo geeti a ikpe bụ njikọ nke na- eji chọọ ma ọ bụ jikọta Downline nke na-ere ngwaahịa nke SFI na nnọchite anyị. Dị ka ihe atụ a na ikpe m uzo geeti nke e nyere site na SFI : http://www.sfi4.com/11355467 ma mgbe ndị mmadụ na-emeghe njikọ ha, ha banye na mgbe onye ga-aghọ anyị downline .
Ọ bụghị naanị na ọ bụ nke ukwuu mgbe nile maka variant n'ụdị nke uzo geeti ike ederede ma ọ bụ ọkọlọtọ , akwụkwọ ọkwa wdg . ị nwere ike
inwe Ọrịa Aids ngalaba na Links Marketing http://www.sfimg.com/Resources/Marketing/MarketingAids.sfi
Ọ bụrụ na ị debanyere aha ke SFI ị ga- njikọ gị nwere ike iji onwe gị na nzube e mesịrị. Ọ bụrụ na ị banyere elu , banye n'elu ugbu a.
Nzuzo Key unen ke SFI
Nzuzo Key ka Ọ Ghọọ bara ọgaranya na SFI :
1. Che : Che gị ahọrọ nke SFI mkpokọta Atụmatụ ( họrọ otu ma ọ bụ karịa - ịhọrọ site na 12 ụzọ dị iche iche iji mee ka ego ).
2. GHARA ỊBỤ Who Am : Who Am iji kwalite ozugbo o kwere omume ) by ụzọ zuo ma ọ bụ na-ere ngwaahịa SFI .
3. AFFILIATESS sponso : onye nkwado gị mmekọ na SFI ( SFI 's Network EyeEarn mfe - ị nwere ọhụrụ Mgbakwunye ego !)
4. ILM Who Am mbufo ENYEMAKA : Nyere gị mmekọ na Who Am ma Team ndú (Nani gị aka nwere ike PSA 5 Team Onye Ndú ).
5. Kwuo ihe nzuzo ka ndị enyi gị !
<http://www.sfippa.com/14202850/real> Gụọ ihe
Posted by Celoteh Mimpi at 12:21 AM